इदको अवसरमा नेपाली कलाकार हरु सांगीतिक कार्यक्रम गर्न मलेसिया पुगेका थिए। तर नेपाली कलाकारलाई मलेसियन अध्यागमनले पक्राउ गरेको थियो। त्यसपछि उनीहरु को बारेमा थप जानकारी आउन सकेको छैन। यसै विषय थप रहस्यमय बन्दैँ गएको गायक राजेश पायल राईले बताएका छन । कार्यक्रम गर्न पुगेका गायिका सुनिता थेगिम, श्रेया राई, सुजन आङदाम्बेसहित स्थानीय कलाकार र आयोजक पक्राउ परेका थिए ।
राजेश पायल राइ लाइभ आएर यस बारेमा जानकारी दिएका हुन्। आफु पनि पक्राउ परेको हो कि भन्ने बिषयमा धेरैले प्रश्न गरेपछि लाइभ आएर राजेश पायल राइले सबैलाई यस्तो जानकारी दिएका हुन्। मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित कोताया कम्प्लेक्समा भएको कार्यक्रममा अध्यागमले छापा मारी उनीहरुलाई पक्राउ गरेकोे समाचार बाहिरिएको छ।
पक्राउ परेका आयोजक र कलाकारलाई पुत्राजायामा रहेको अध्यागमनमा लगिएको छ । मलेसियामा सांगीतिक कार्यक्रम गर्नको लागि स्थानीय प्रशासनसँग अनुमति लिनुपर्ने नियम छ । तर नियम विपरीत सांगीतिक कार्यक्रम गर्न लागेकाले अध्यागमले कलाकार र आयोजकलाई पक्राउ गरेको बुझिएको छ । तर प्रक्राउ गर्नुको कारण भने खुलाइएको छैन । पक्राउ कलाकारहरुको विषयमा आज फेसबुक लाइभमा कुराकानी गदैँ चर्चित गायक राजेश पायल राईले उनीहरुको अवस्था अझै अज्ञात भएको जानकारी दिनुभयो ।
राजेश पायल राइ ले आफ्नो फेसबुक मार्फत यस्तो लेखेका छन्
म एउटा नेपाली त्यही माथी कलाकार भएको नाताले गर्न सक्ने गरे तर अफ्सोच त्यहाँ तेती बेलै बिदा पर्नु,कलाकार (स्रेया,सुनिता थेगिम्) कहाँ लागिएको वा राखिएको ठाउ थाहा नहुनु ,आयोजक (ssog) सम्प र्क बिहिन हुनु ,एम्बेसडर महेश टृपाथी ज्यु को फोन नलाग्नु यावत कारण ले मैले चाहदा चाहदै केहि गर्न सकिन यधपी म नेपाल फर्के पनि त्यहाँ रहेका मेरा आयोजक हरुले सहयोग गर्ने नै छ भन्ने बाचा का साथ नेपाल फर्के । सबैको भलो होस .
रवि लामिछाने र निकिता पौडेलसँगको पहिलो अन्तरबार्ता ! प्रेमजीवन, बिगतको वारेमा खुलेर बोले
आँधी पिडितहरुका लागि धुर्मुस राहत सहयोग लिएर हस्तान्तरण गर्न पुगे
भ्रष्टाचार विरुद्ध कर्ण श्रेष्ठ गर्दैछन् साइकल यात्रा........
Previous Article ऐतिहासिक चलचित्र ‘कीर्तिपुर’ असार १३ देखि देशभर प्रदर्शनमा आउदै
Next Article तेरिया मगरको घरमा यस्तो दृश्य ! सबै बने भाबुक, भरियो आखामा आसु…………… भिडियो हेर्नुस